Astaamaha iyo sharciyada kubbadda laliska | Ragga Stylish
Waxyaabaha Kubadda Laliska
El kubbadda laliska Waa isboorti si fiican loo yaqaan oo ku baahsan adduunka oo dhan tan iyo markii si isdaba joog ah loogu dhaqmo. Waa isboorti loo wada ciyaaro koox ahaan isla markaana bixiya faa iidooyin wanaagsan jir ahaan iyo maskax ahaanba. Waa isboorti aad ku hagaajin karto xaaladda jireed inta aad ka shaqeyneyso xiriirka kooxda.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato kubbadda laliska.
1 Waa maxay kubbadda laliska
2 Sida loo ciyaaro kubbadda laliska
2.1 Maxjarka kubbadda koleyga
2.2 Ciyaartoyda iyo booskooda garoonka ciyaarta
2.3 Wareega kubbadda laliska
2.4 Buugga buugga
Waa maxay kubbadda laliska
Waa isboorti kooxeed ka kooban 6 xubnood. Labadan koox ayaa iskaga hor imanaya garoon leh qaabab kala duwan. Koox kastaa waxay ku jirtaa hal dhinac oo ka mid ah maxkamadda oo loo qaybiyay shabaq ay tahay inay kubbadu uga gudubto qayb ka mid ah dhinaca kale iyadoon la taaban ama la hoos marin.
Si loo helo dhibco loona horseedo ninka noocaas ah guusha, waxaa lagama maarmaan ah in kubaddu taabato dhulka maxkamadda ka soo horjeedda ama ay ka baxdo khadadka maxkamadda, iyadoo uu taabtay laacib ka tirsan kooxda kale.
Sida loo ciyaaro kubbadda laliska
Waxaan qori doonnaa dhamaan astaamaha iyo sharciyada ciyaarta. Tan awgeed waxaan u kala qaybinaynaa qodobbada ugu muhiimsan.
Maxjarka kubbadda koleyga
Maxkamaddu waa aasaaska ciyaarta noocan ah. Waa waxa loola jeedaa berrinka. Cabbirkeedu waa 18 × 9 mitir waana inuu lahaadaa aag bilaash ah oo ugu yaraan 3 mitir ku wareegsan. Waxaa loo qaybiyaa laba beerood khadka dhexe ee shabaqa la dhigo. Dusha shabaqa waa inuu ku yaal meel dhererkeedu yahay 2.43 mitir oo ka sarreeya xariiqda dhexe marka raggu ciyaarayo iyo joogga 2.24 mitir markay dumarku ciyaarayaan
Dhanka kale, mid kasta oo ka mid ah labada garoon ee maxkamadda gabi ahaanba loo qaybiyay waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. Dhinac waxaan leenahay aagga weerarka oo ay xaddiday khadka dhexe iyo xarriiq laga dhejiyay 3 mitir. Khadkan waxaa lagu magacaabaa khadka weerarka. Dhinaca kale, waxaan leenahay aagga difaaca. Aaggan waxaa lagu xadiday xariiqda weerarka iyo khadka dhamaadka berrinka.
Ciyaartoyda iyo booskooda garoonka ciyaarta
Sidaan horay u soo sheegnayba, waa inuu jiraa 6 ciyaartoy oo garoonka walba jooga markasta. Dhamaan ciyaartoyda marka laga reebo Libero waa inay maraan dhamaan boosaska garoonka. Taasi waa, waa inay ka feejignaadaan weerarka iyo difaaca labadaba. Marka adeega la ciyaaro, ciyaartoyda intiisa kale waxay ku wareegi karaan guud ahaan dusha garoonka iyo aagga xorta ah. Waa xilliyadan ciyaareed ee aan loo baahnayn in shax la badbaadiyo.
Dabcan, sida ugu wanaagsan ee tababarka iyo qaabdhismeedka ciyaartooydu ugu jiraan garoonka ciyaarta, waxaa sii wanaagsanaanaya tayada ciyaarta iyo u diyaargarowga weerarka iyo difaaca iyo abaabulka kooxda labadaba. Inta lagu guda jiro adeega ciyaartooydu waa inay ilaaliyaan booska loogu talagalay wareejinta. Meelahan ma dhisayaan masaafada ugu yar ee u dhexeysa hal iyo ciyaaryahan kale. Intii lagu gudajiray ciyaartoy kasta waxaa lagu beddeli karaa mid kale hal mar oo keliya. Ciyaaryahankii ka baxay garoonka ayaa laga yaabaa inuu ku soo laabto ciyaarta haddii ay tahay inuu dib ugu soo laabto booskiisa bedelkiisa. Marka la beddelo, lama beddeli karo illaa set-ka soo socda.
Wareega kubbadda laliska
Goobta lagu ciyaaro waxaa loo qaybiyaa 6 aag oo loo qaybiyay 3 aag weerar ah iyo 3 aag difaac ah. Bilowga ciyaarta, ciyaartoy kasta waa in loo qoondeeyo aag ay tahay inuu ku jiro xilliga adeegga. Sidii aan horay u soo sheegnayba, mar haddii adeegga la qabto, ciyaartoydu ma haystaan ​​wax jago ah oo loo xilsaaray laakiin waxaa la dhigi karaa meel kasta oo ka mid ah garoonka dhexdiisa.
Marka kooxdu aysan adeegin oo ay dhibic helaan (taasi waa, waxay soo ceshanaysaa adeegga) xubnuhu waa inay u wareegaan saacad. Sidan oo kale, dhamaan ciyaartoydu waxay ku dhamaanayaan inay maraan dhamaan boosaska garoonka weerar iyo difaac labadaba. Tusaale ahaan, ciyaartoydu waxay ka guuri karaan aagga 2 una wareegi karaan aagga 1aad iyo wixii la mid ah.
Wareegyada oo dhan waa qasab waana in marwalba la ixtiraamo inta lagu jiro adeegga.
Horaan u soo sheegnay nooc ciyaartoy ah oo aan ixtiraamayn sharciyada ay dadka kale leeyihiin. Waxaa loogu yeeraa libero. Isagu waa ciyaartooy difaac kaliya leh wuxuuna leeyahay taxaddarro xaddidan marka la barbar dhigo xubnaha intiisa kale. Ciyaartan, libero waa midka beddeli kara ciyaartoy kasta oo ku sugan aagga difaaca oo waad iman kartaa oo aad u bixi kartaa si aad u beddesho inta jeer ee aad u baahan tahay. Si kastaba ha noqotee, waligiis badal uma noqon karo ciyaaryahan ku sugan aagga weerarka.
Haddii aad daawato ciyaar kubbadda laliska, waxaad si dhakhso leh u aqoonsan kartaa buugga. Tani waa sababta oo ah laacibku wuxuu xirtaa dhar ka duwan kuwa kale. Waxaa jiri kara kaliya hal Libero koox kasta oo garoonka ciyaarta ah. Guud ahaan, Libero ma fulin karo ficilada soo socda:
Noqo kabtanka kooxda ama kabtanka ciyaarta
Buuxi istaroog haddii kubaddu gebi ahaanba ka sarreyso shabaqa. Tan waxaa sidoo kale loo yaqaan xaraashka
Marka adeegga la sameeyo, wuu ku wareegi karaa goobta laakiin wuxuu leeyahay xannibaado cayiman aagga weerarka sida ay yihiin, ma hor istaagi karaan ama ma sameyn karaan isku day xannibaado ah haddii ay far u dhaafaan saaxiib kale, ma awoodo inuu weeraro haddii kubaddu shabaqa dhaafto.
Si ka duwan cayaaraha kale, kubbadda laliska ma laha waqti muddo ah. Ciyaarta ayaa dhamaaneysa marka labada koox midkood uu guuleysto 3 xirmo. Sidaad u aragto, waa cayaar aad u xiiso badan inkasta oo aysan caan ku ahayn cayaaraha kale sida kubbadda cagta ama kubbadda koleyga.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan uga baran karto kubbadda laliska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Waxyaabaha Kubadda Laliska